Isbedelada warshadaha - Fangda Baako Co., Ltd.
Saamaynta robotka qaybinta ee saadka
Horumarinta tikniyoolajiyadda saadka, waa in aynaan aqoon u lahayn aaladda rarka. Nolosheena maalinlaha ah, qaar badan oo ka mid ah badeecooyinkayaga tooska ah ayaa la keenaa gudbiyaha, laakiin sidoo kale magaalooyinka qaar waxay bilaabeen inay caan ka dhigaan aaladda gudbinta. Si loo sii xoojiyo fahamkeena ku saabsan aalado wax lagu qeybiyo, waxaan kugu qaadaneynaa inaad fahamto saameynta aaladaha wax lagu qeybiyo ee ku saabsan warshadaha saadka.
A. Yaree wakhtiga-qaadashada amar ilaa gaarsiin
Fikradda ah fulinta amarka isla marka lagu helo waqtiga dhabta ah waxay noqoneysaa mid dhab ah. Robotyadu waxay fududeyn doonaan in amarrada laga soo raro xarumaha wax soo saarka loona wareejiyo baakidhyada loo yaqaan 'robotic trays' si loo raro baakadaha, qiimaha cabbirka, dekedda xamuulka iyo weelasha maraakiibta.
B. Yaree khaladaadka iyo baahida loo qabo dib u habeynta saadka
Awoodda aalado aalado si ay u duubaan xog fara badan oo ay u baaraan qaladaadka leh saxsanaanta weyn waxay keeneysaa hoos u dhigid khaladaad aan la qiyaasi karin.
Natiija ahaan, waxaa yaraan doona dalabkii loo rogi lahaa hannaanka saadka ee ku saabsan amarrada aan la hubin.
C. Tallaabooyinka dayactirka ee kahortagga ah
In kasta oo aalado aysan u baahnayn cunto ama biyo, waxay u baahan yihiin dayactir.
Kordhinta isticmaalka aaladaha roboolka lagu keydiyo iyo dhamaan saadka ayaa u baahan doonta injineero badan iyo khubaro si loo hirgaliyo dayactirka kahortaga ah ee uu wado Internetka Waxyaabaha, iyo in la xaliyo dhibaatooyinka soo kordha. Doorka shaqaalaha aadanaha ee warshadaha saadka ayaa asal ahaan isbedelaya.
D. Yaree culeyska foosha
Sida aan kor kusoo sheegnay, adeegsiga aaladaha aaladaha saadka waxay si toos ah u saameyn doontaa shaqada jireed ee ay qabtaan shaqaalaha aadanaha.
In kasta oo ay tani u muuqan karto anshax iyo naxariis, haddana waxay siisaa fursad ay shaqaaluhu ugu wareegaan shaqooyin fahan badan oo raaxo leh.
Isticmaalka aaladaha loo adeegsado howlaha gacanta, sida socodka muddo dheer, qaadista alaabada iyo walxaha culeyska badan, ama ku lug lahaanshaha noocyo kale oo jimicsi ah oo laga yaabo in shaqaalaha qaar aysan ku guuleysan karin, waxay kordhin doontaa shaqaalaha iyadoo shaqooyin la siinayo dadka oo aan ka shaqeyn karin howlaha saadka ee soo jireenka ah.
E. Yaree qaabka dib u dhaca gaadiidka inta udhaxeysa soo saaraha iyo xarunta qeybinta
Maaddaama aalado aad u tiro badan loo adeegsanayo geeddi-socodka saadka, dib-u-dhaca gaadiidka ee u dhexeeya noocyada kala duwan ee gaadiidka ayaa sidoo kale la dhimi doonaa.
Tani waxay noqon doontaa natiijada falanqaynta degdegga ah ee saameynta ay ku leedahay keenista, oo ay ku jiraan cimilada, xaaladaha taraafikada iwm.
Ugu dambeyntiina, badeecadaha sida ugu dhakhsaha badan ku gaadha xarumaha qaybinta ayaa si dhakhso leh loogu geyn karaa macaamiisha.
F. Ku shaqeynaya awood sifiican oo dhaqso leh usameynta internetka Waxyaabaha
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee loo adeegsado aaladaha aaladaha casriga ah waxay ka yimaadaan internetka waxyaabaha.
Maaddaama robotyadu ay internetka ka imaanayaan, baahida loo qabo is-dhexgal badan oo u dhexeeya aalado kala duwan ayaa kori doona.
Natiija ahaan, Internetka Waxyaabaha wuxuu la gelayaa xiriir shucuur leh aalado.
Maaddaama qayb ka mid ah xiriirku uu sii ballaaranayo, ayaa tan kale ay sii ballaaraysaa, iyo dhinaca kale.